शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ, कोरोना सर्न सक्छ : चिकित्सक – Nepal Insider
कोरोनालाई जितेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ७ जना डिस्चार्ज
क्वारेन्टिन बनाइने तारेदेखि पर्यटकीय होटलसम्मको रुमरेट ताेकियाे, कति लाग्छ होटलमा बस्न ?
बाँच्ने थिए सुर्खेतका कोरोना संक्रमित युवा तर यसरी ‘११ औं मृ’तक’ बनाइयो
रुकुम घटना बन्यो झन बन्यो रहस्यमय, भयो नयाँ खुलासा !
पानी समेत किनेर खान पाउँदैनन् एम्बुलेन्स चालक , छिः छि दुरःदुर गर्छन्
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ, कोरोना सर्न सक्छ : चिकित्सक
शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ, कोरोना सर्न सक्छ : चिकित्सक
चितवन, ५ जेठ । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बिहान र साँझ हिँड्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । साँघुरा बाटामा समेत हिँड्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि जोखिम थपिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मानव स्वास्थ्यका लागि व्यायाम अतिआवश्यक पर्दछ । चिकित्सकहरूले पनि बिहान बेलुकी हिँड्न सुझाव दिने गर्दछन् । यतिबेला लकडाउनका कारण दिनभर घरमा खाएर बस्ने मात्रै गर्दा विभिन्न रोग लाग्न सक्ने जोखिम त्यतिकै छ ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा प्रकाश खतिवडा भिडमा बाहिर नहिँड्न सुझाव दिनुहुन्छ । तीन मिटर फरकमा गुणस्तरीय मास्क लगाएर हिँड्न सकिने भए पनि त्यो सबै व्यवस्थापन शहरी क्षेत्रमा सम्भव नहुने भएकाले जोखिम नमोल्न उहाँको सुझाव छ । घरमा योग गर्न सुझाव दिँदै खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । साँघुरा सडकमा गाडी आउँदा बीचको भाग छोड्नु पर्छ । छेउबाट भिड गरी हिँड्दा उच्च जोखिमको सम्भावना रहन्छ ।
वरिष्ठ फिजिसियन डा कालिदास अधिकारी सामाजिक दूरी कायम गरेर तीन पत्रे (ट्रिपल लेयर) सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दा कम जोखिम भए पनि भिडमा नहिँड्नु नै उपयुक्त भएको बताउनुहुन्छ । अहिले बजारमा त्यस्ता मास्क पाउनै मुस्किल भएको भन्दै यो जोखिमको समयमा घरमै व्यायाम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । पहाडी र खाली ठाउँमा हिँडडुल गर्न र सामाजिक दूरी कायम गरी खेतमा काम गर्न सकिए पनि शहरी क्षेत्रमा नहिँड्न उहाँको सुझाव छ ।
अहिले जिल्लाको शहरी क्षेत्रमा बिहान सबेरैदेखि र साँझ हुलका हुल मानिस हिँड्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा भन्दा धेरै मानिस हिँड्ने गरेको देखिन्छ । मास्कविना र साधारण कपडाको मास्कमा हिँड्डुल गरेको पाइन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन छ । नजिकैबाट हिँड्नेले खोक्दा, थुक्दा, हाच्छ्यु गर्दा यसको जोखिम हुने अधकारीको भनाइ छ । घरमै बस्ने र व्यायाम गरेमा सबै रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ ।
नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना वेपत्ता
नारायणी नदीमा डुबेर दुई जना वेपत्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१६ का २५ वर्षीय प्रवीण दवाडी र २५ वर्षीय विवेक भट्टराई रहेका छन् ।
उनीहरु आइतबार दिउँसो ४ः३० बजे महानगरपालिका–१६ को गणेश मन्दिर नजकै नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर वेपत्ता भएका हुन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तो छ रुखकटहर खानुका फाइदा
विज्ञहरू भन्छन् : नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु बढ्न सक्छ, तयारी राम्रो देखिएन
क्यान्सरबाट जोगाउनु देखी प्रजनन क्षमता वृद्धि सम्म हुन्, यि हुन फर्सीको मुन्टा खानुका अचुक फाइदाहरु
गर्मीमा घामले डढेको छाला ठिक पार्ने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु !